Dooddii Xalay Iyo xulafaddii Isu Bahaysatay Gudoomiye Cirro. | Baligubadlemedia.com
Dooddii Xalay Iyo xulafaddii Isu Bahaysatay Gudoomiye Cirro.
Cabdi Inaadeer waan ku salaamay. Fadlan daawo doodan, akhri waxaan qorey. Wixii aad ku dari karto ku dar, ka dibna u dir Oodweyne, Qaran news, iyo hadhwanaag. Cinwaanka: Faysal iyo Muse oo muujiyey baqdinta ay ka qabaan guulaha Xisbiga Wadani!
Muse caabuq iyo Faysal waali cas uma dhigmaan madaxweyneyaal. Dalka waxa hogaamin kara madaxweynaha sharafta leh ee Cabdiraxman Maxamed Cabdillahi Cirro, oo ah nin degan, akhlaaq badan, siyaasi ruug cadaa ah, isla markaana fuqa ayuu jebiyaa ninkii edeb darooda.
Faysal isaga waa la yaqaanaa oo inuu xuf yahay, xalayna waxa uu la jirey xisbi xaakimka. Doodii TVga ee loo
qabtey saddexda musharax https://www.youtube.com/watch?v=t_5FldiTn5c, Faysal in yarna uma ekeyn inuu mucaarid yahay! Waxa uu weerar ku hayey Cirro, mar keliyana ma weerarin Xisbiga talada dalka haya iyo Muse toona!
Weriyuhuna khibrad wanaagsan ma lahayn, waayo waxay ahayd inuu tartansiiyo Faysal iyo Muse. Nasiib daro taasi ma dhicin.
Sida dooda loo abaabuley, Muse iyo Faysal waxaad moodeysey Xulufo u saaxiibey oo meel uga soo wada jeeda Xisbiga wadani. Taasi waxay muujinaysaa
baqdinta ay labadooduba ka qabaan in wadani guuleysto iyagoo fahansan awooda Xisbiga wadani iyo taageerada uu ka hasyto dadweynaha.
Musena Xalay wuxuu caalamka u muujiyey inuu yahay nin aflagaado badan. Waa nin calool xun oo aan aqoonin sida dadka loola macaamilo. Madaxda adduunku way daawanayeen Xalay, qaar badanina way daawan doonaan wiigan. Jidhkiisa waxa ka muuqata cadho. Body languageskiisu wuxuu miijinaysaa inuu yahay shaqsi calool xun.
Marka la tarjumo inuu national Tv ka caayey Cirro, waxay sheegi doontaa dadnimadiisa iyo nusqaanta shaqsiyadiisa. Malaha astaamihii madaxnimo. Ma yaqaano diblomaasiyad. Ma laha sharaf. Intaa waxa u dheer taariikhdii madoobeyd ee dhaxal galka u noqotey waqtigii dagaalkii sokeeye ka qarxay Somaliland!
Sidoo kale Faysal iyo Museba waxay hujuumeen Cirro. Iyagu marnaba ismay weerarin. taasina waxay cadaynaysaa in Cirro yahay musharaxa dadka badankiisu raacsan yihiin oo labadooduba aad uga baqayaan in la doorto!
Qore:- Ismahan Indh-yare